Kenya oo kordhisay wakhtiga cafiska guud ee ay u fidisay dhalinyarada Al-Shabaab ku biiray - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldKenya oo kordhisay wakhtiga cafiska guud ee ay u fidisay dhalinyarada Al-Shabaab ku biiray
Saddex dhalinyaro Al-Shabaab ah oo lagu qabtay dagaaladii Puntland iyo Al-Shabaab bishii Maarso, 2016. [Sawirka: Archive]
Nairobi-(Puntland Mirror) Kenya ayaa shalay oo Sabti ahayd u kordhisay wakhti aan xad lahayn u soo bandhigida cafis guud dhalinyarada kuwaasoo ay jiideen ayna xagjireeyeen kooxda A-Shabaab kadib markii loo balanqaaday taageero dhaqaale.
Isku-duwaha gobolka xeebta Nelson Marwa ayaa shalay oo Sabti ahayd sheegay in dowlada ay sii wadi doonto dhaqan-celinta kuwa kasoo noqonaya Al-Shabaab si aan wakhti lahayn.
Warsidaha Kenya kasoo baxa ee Capital FM oo soo xiganaya Marwa ayaa sheegay “Mid walba oo taabici ah waa in uu ogaadaa u yeerida uuna ka baxaa sababtoo ah lama dagaalami kartid dowlada. Taasaan kuu cadaynayaa. Kama waaban kartid dowlad sharci ah mana jirto wax ficil ah oo kaa dhan ah oo lagaa qaadi doono.”
Barnaamij hore oo cafis guud ahaa, kaasoo uu iclaamiyay wasiirka arrimaha gudaha Kenya Joseph Nkaissery bartamihii bishii Maarso 2015-kii, ayaa dhacay bartamihii bishii May ee 2015-kii.
Dhaqalan-celin hore oo ay Kenya samaysay, ayay ku ogaatay in intoodii badnaa dadkii soo laabtay ay sheegeen in ay shaqo la’aan darteed go’aansadeen in ay ku biiraan Al-Shabaab, taasoo u soo bandhigtay taageero dhaqaale.
Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya, tan iyo bishii Maarso 2015-kii, in ka badan 1,000 dhalinyaro Al-Shabaab ah ayaa isku soo dhiibay saldhigyada kala duwan ee ciidamada booliiska Kenya ay ku leeyihiin dalka oo dhan.
Garoowe-(Puntland Mirror) Gaadiid sida gargaar ay ku jiraan cuno iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah nolosha oo ka baxay magaalooyinka waa-weyn ee Puntland ayaa ku sii jeeda magaalada ay fatahaaduhu ku dhufteen ee Qardho. [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wariyeyaasha Soomaaliya keliya ma bartilmaameedsato ururka argagixisada Al-Shabaab, balse sidoo kale ciidamada dowladda Soomaaliya, haayada Amnesty International ayaa sidaa ku sheegtay warbixin ay sii deysay maanta oo Khamiis ah. Xoriyada hadalka iyo fikir [...]